Cabashooyinka magangalyo doonka oo sii kordhaya | Somaliska
Shalay waxaan soo qornay in magangalyo doonka ku nool magaalada Arboga ay diideen cuntadii loo dalbay balse waxaa sidoo kale soo baxaya dhacdooyin midaas ka kulul oo ka dhacaya kaamamka kala duwan ee Laanta Socdaalka ay dadka geyso.
30 ka mid ah dadka ku xareysan kaamka Askersund ee u dhow Örebro ayaa isaga tagay halkaasi iyaga oo tareenka u socda Gävle ku raacay tikid la’aan. Markii tareenka uu marayo kamuunka Lindesberg ayaa dhamaantood laga dajiyay tareenka iyaga oo bas dib loogu celiyay kaamkii. Balse markii ay kaamkii gareen ayay diideen in ay ka dagaan baska iyaga oo ka cabanaya in nadaafada kaamka ay tahay mid aan loo dulqaadan karin oo ay doonayaan in ay dib ugu laabtaan kaamkii hore ay ugu jireen ee ku yaala Gävle. Ugu dambeyntii booliska ayaa arintii soo kala dhexgalay.
Dhinaca kale kaamka ku yaala magaalada Eskilstuna ayaa la xirayaa bisha Janaayo ka dib markii ay dagaalo xun oo u dhexeeya magangalyo doonka halkaaasi ka dheceen maalmihii ugu dambeeyay oo waxaa si qatar ah ugu dhaawacmay mid ah mid ah dadka halkaasi ku jira oo midi la galiyay.
Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in aysan boos u hayn dadka oo kaamamka qaarkood ay dadku seexdaan jaranjarada. Nolosha kaamamka qaarkood ayaa ah mid aad u liidato iyadoo dadka qaar ay ku qaadato mudo sanado ah in ay halkaasi ku nagaadaan.
Mid ka mid ah dadka ku jiray kaamka Eskilstuna ayaa hada waxaa lagu soo oogay dambi ah in uu isku dayay in uu dilo qof kale.
Allahayow dhibka soo galootigeena na haysta naga saar adigaa awood badane maalin walba waa dhibaato joogtaa, qaar aan annagu gacmaheena ku sameysanay iyo kuwa naloo gaystayba intaba.
Waxaad halkaan ku baraneysaa wanaaga dalkaagii hooyo, waxaadna ogaanaysaa in wax badan oo markaad wadankaagi joogtey aad ka aaminsanayd qurbaha ay beenoobeen.
Allow sahal umuuraha aamiin.
as dhamaan waan idin salaamay khaasatan bahda somaliska bacda salaam.rantii waa arin xanuun badan,shalay mid baynu ka cabaneyney maantana midbaa tiri fariiso.anigu waxaan u malaynaa dhibtu inuu ka yimid dadkii badnaa ee magaca soomaali ku soo galay ahayna somaali,waayo horaa loo yiri baruur kaliya ayaa baruuro badan qurmisa marka dadkeena waa dad aad iyo aad u fiican laakiin balaa ku soo hoos dhuumaneysa.
Khadija, run baad sheektay walaalo.Dad badan ba oo haysta wadamadan gaalada jano oo si kasta hadaad uga dhaadhicid dadki wadanki ku rumaysanmaayan.Sweden ekonomigi hada wuu xumaadey sida ay dawladan cusub oo qabsatay oo dadka qaxootiga oo daran.Ilaahy ha sahlo wixi dhibaateysan.
soo noqda hadaaay dhab idinka tahay oo nin kastow somalia kusoo noqo hadii kale meesha sheeko iyo waxaad ku haysaan muftaalad